Ny zavatra niainako niaraka tamin'i Zentyal | Avy amin'ny Linux
alaintm | | Tambajotra / seriver
Miarahaba ny rehetra, efa elaela izay no nanoratako tao Avy amin'ny Linux noho ny antony miasa ary androany dia te hizara traikefa iray izay somary miala amin'ny namoaka ho ahy amin'ny fampandrosoana ny tranonkala sy hiditra amin'ny fitantanana.
Rehefa avy nitantana fotoana fohy ny tamba-jotra ny orinasa izay iasako dia nipoitra ny filàna ny fifindra-monina ny fikirakirana efa misy ho an'ny fitantanana sehatra sy ny serivisy ifotoran'ny intranet anay.
Miorina amin'ny ny fanahafana efa misy Debian + Samba 3 + LDAP, BIND9 + Fanamboarana ary ny zavatra hafa rehetra manantona amin'ny famoronana PDC amin'ny Linux ary manome serivisy ho an'ny PC misy rafitra Windows XP sy avo kokoa. Ity tranga ity dia nampiseho fahasarotana amin'ny fikojakojana ary nahatonga ny fizotry ny fitantanana sy ny fanarenana ny mpampiasa avy amin'ny mety tsy fahombiazan'ny asa.
Rehefa avy nandinika ny mety misy ary mitady ny fandanjalanjana saika mety dia nifidy ny fampiasana ny Zentyal, vahaolana mampiseho ny serivisy rehetra ilainay.
Zentyal (anarana taloha eBox) dia vahaolana ho an'ireo orinasa kely sy salantsalany, izay maka ny tsara indrindra amin'ny Free Software ary mampivondrona ny zavatra rehetra na saika ny filàna ao anaty tamba-jotra misy endrika orinasa na tsia. Anisan'ireo vahaolana omeny isika afaka manonona: fitantanana fotodrafitrasa amin'ny tamba-jotra, vavahady, birao na mpizara serasera, mba hilazana ireo tena lehibe.
Betsaka ny singa voadinika rehefa mifantina rafitra iray ary indrindra amin'ny fisafidianana ny Zentyal, ny antontan-taratasy, ny fanohanan'ny vondrom-piarahamonina, ny fototry ny rafitra (izay na dia Ubuntu Server LTS aza na dia aleoko aza Debian), ny fomba Izy io dia tantanana ary ao anaty CD tokana ananantsika izay rehetra ilaintsika, dia ireo antony nahatonga azy io ho safidintsika.
Hatreto dia toa hitako fa naseho fa ho antsika Zentyal no vahaolana, noho izany tsy maintsy miditra an-tsehatra isika, fa zavatra iray raha tiako hazavaina, tsy mikasa ny hamadika ity lahatsoratra ity ho fampianarana momba ny fomba apetraho i Zentyal, fa kosa hiresaka momba ireo antsipiriany izay manakana ny fananganana sehatra na rafitra iray ary manazava ny antony tsy hiresahako ny fametrahana azy aho.
Ao amin'ny tranokala Zentyal documentation, mandrakotra ny fizotrany manontolo amin'ny antsipiriany sy ny tsara indrindra amin'ny fiteninay izy, ary lasa teboka tsy maintsy adino.
Raha vantany vao vita ny fametrahana ary voafantina ny serivisy hapetraka, mpampiasa maro no sendra olana fa rehefa manampy serivisy vaovao amin'ny fotoana hafa dia tsy azo atao izany, satria tsy afaka mampiasa ny CD an'ny fametrahana antsika izy ireo, maninona no mitranga izany? tsy miraharaha azy fotsiny ny mpitantana ny fonosana.
Famerenana ireo fisie config apt, mariho fa tsy voatonona ao amin'ny source.list amin'ny CD fametrahana ary eny amin'ny toerana ana-pananganana Ubuntu sy Zentyal isan-karazany. Tsotra be ny vahaolana ary ny baiko ihany no mila ampiasainao:
Manampy ny CD fametrahana anay ao amin'ny list.list izay efa nanehoan-kevitra teo aloha momba ny tsipika rehetra misy ao aminy izahay ary amin'izao fotoana izao dia afaka manampy serivisy betsaka araka izay tadiavinay avy amin'ireo nomen'i Zentyal.
Amin'ity fotoana ity dia nametraka ny Zentyal miaraka amin'ireo serivisy ilaina ao amin'ny orinasanay aho ary eto no mipoitra ny sakana faharoa.
Ny serivisy mailaka ao Zentyal dia mampiasa Postfix sy Dovecot, tsotra ny fikirakirany, mamela ny fandefasana mivantana amin'ny raharahan'ny orinasa na andrim-panjakana miatrika Internet na mampiasa smarthost ary ity no tranga misy ahy, fa ny fandefasana mpizara izay mahatonga ny fampitana ny serasera eto amintsika dia tsy azo tanterahina. .
Rehefa avy nandany ora maro namaky ny lohantsika sy antso vitsivitsy ho an'ny namantsika Elav izay manana traikefa tany Zentyal, dia fantatray fa ao anatin'ilay masontsivana mynetworks ao amin'ny main. jer avy amin'ny Postfix ny ip an'ny relay dia tsy nambara ary vita ny majika ary efa nandray sy nandefa ny fampitanay ny mpizara anay.
Saingy tsy feno tanteraka ny fahasambarana, rehefa mamerina ny fikirana ao amin'ny main. jer postfix dia niova tamin'ny fanjakany teo aloha ary izany dia satria, ary, ny filozofia Zentyal dia mifototra amin'ny fitantanana ireo rakitra fikirakirana ny rafitra amin'ny alàlan'ny modely, izay hita ao amin'ny / usr / share / zentyal / stubs / ary izy ireo dia voakambana amin'ny serivisy samihafa ka ny safidy tadiavina dia novaina na nampiana ary rehefa manomboka indray ny serivisy na ilay mpizara mitovy dia hijanona maharitra ao amin'ireo fisie fikirakirana.
Ao amin'ny antontan-taratasy ofisialy ny fizarana "Advanced customization of services" dia manazava amin'ny antsipiriany ny fomba fanitsiana ireo môdely fandaminana sy ny fomba fanao natolotra mba hanovana ny modely fanaingoana, safidy izay ampiasako ankehitriny.
Ny mpizara vaovao misy ahy miaraka amin'i Zentyal dia efa tamin'io fotoana io, nanome ny serivisy rehetra ao amin'ny tamba-jotra tsy misy olana, ny mifanohitra amin'izay indray mandeha dia odyssey, tsy izany. PC miaraka amin'i Microsoft Windows XP sy ambony no niditra an-tsakany sy an-davany tamin'ny domaine ary ity dia iray amin'ireo fiovana lehibe amin'ny Zentyal 3 rehefa mampiasa Samba 4.
Ireto serivisy manaraka ireto dia efa azo jerena ao amin'ny tambajotranay:
Webmail miaraka amin'ny interface Roundcube mahavariana.
Proxy sy ny fikirakirany ao amin'ny navigateur amin'ny alàlan'ny fikirakira mandeha ho azy (ny anjara birikiko).
Mpizara fotoana amin'ny alàlan'ny ntp.
PDC feno ho an'ny fiantsonana ao amin'ny Microsoft Windows.
Serivisy Firewall ho an'ny tambajotra nat sy fanaraha-maso fidirana.
Serivisy mpitondra hafatra.
Fanaraha-maso ireo serivisy.
Fandraisana sy fitantanan-draharaham-pitantanana ny serivisy
Hatramin'io fotoana io, inona no sisa tavela? Eny, alao antoka fa ireo mpampiasa vondrona sasany dia afaka niditra tamin'ny domains izay avela amin'ny alàlan'ny Proxy ary ny marina dia i Zentyal manamora ny fizotrany, saingy araka ny nolazaiko teo aloha, fahasambarana tsy feno. Betsaka amin'ireo tranokala avela no mampiditra rohy mankamin'ny sehatra hafa, noho izany dia nanomboka nandingana ny fifampiresahana fanamarinana tamin'ny mpampiasa tamin'ny fomba niditra an-tsehatra izy.
Nodinihiko indray ny fikirakirana serivisy tamin'ity tranga ity SQUID3 ary ny nahagaga ahy dia tsipika iray izay nandà ireo mpampiasa ireo talohan'ny http_access mandà daholoRaha namela azy hivezivezy tamin'ny faritra sasany aho satria nanampy zotra handà ny vondrona misy an'ireo mpampiasa ireo i Zentyal? Fanontaniana tsara fa tsy dia fantatro loatra ny valiny ary ny nahasosotra ahy vetivety dia ny tsy ahafahan'ny rafitra modely an'i Zentyal manampy ahy.
Ary aiza ny vahaolana? Aiza koa, ao amin'ny antontan-taratasy Zentyal ihany. Ao amin'ny fizarana "Advanced customization of services", dia hazavaina ny fomba fanatanterahana script mandritra ny dingan'ny fampiharana ny fanovana ny fikirakirana ny serivisy.
Misy teboka fidirana 6 amin'ny fanatanterahana ireo script ireo izay fantatra koa amin'ny hoe hooks. Ny roa amin'izy ireo dia ankapobeny ary ny efatra hafa dia isaky ny modely: Alohan'ny hitahirizana ny fanovana, aorian'ny fitehirizana ny fanovana, alohan'ny hitahirizana ny fikirakirana modely, aorian'ny fitehirizana ny fikirakirana mody, alohan'ny hamerenana ny serivisy ary aorian'ny famerenana ny serivisy.
Zentyal dia manome vondrona modely amin'ny famoronana ireo farango ireo izay script bash amin'ny ankapobeny. Miaraka amin'ny fanampian'ny baiko Sed ary ny fampiasana farango alohan'ny hanombohana ny serivisy fitetezana dia manafoana ny tsipika tsy ilaina, ary avy eo manomboka ny serivisy, manjavona ny fitsofohan'ny dinika fanamarinana ao amin'ireo mpampiasa izay voafetra ho vondrona amina sehatra ny fivezivezin'izy ireo.
Ankehitriny, tsy nanana fihemorana intsony aho ary nisy fanitsiana kely fotsiny izay amin'ny alàlan'ny interface interface dia resaka potsitra vitsivitsy ary efa vonona ny zava-drehetra. Ny fehin-kevitro sy ny tolo-kevitro dia tsy ho be loatra, fa tiako ny mikasika ireo teboka izay tsy voakitika ara-dalàna.
Voalohany indrindra, ny Zentyal amin'ny maha vahaolana azy dia matotra sy marin-toerana amin'ny lafiny rehetra ary amin'ny fampandrosoana tsy tapaka, ka izany no mahamety azy amin'ny orinasantsika sy ny andrimpanjakana eto amintsika.
Tombony lehibe dia ny CD tokana ananantsika izay rehetra ilaintsika ary izay tsy ampy arakaraka izay ilaintsika, dia ho ampy ny manampy ny kitapom-bolan'ny Ubuntu ary izay no izy.
Ny rafitra modely dia tsy fatiantoka, ny mifanohitra amin'izay no izy raha ampiasana azy miaraka amin'ny farango, misy fitambarana feno isika ary tsy mamorona rakitra fisie maloto, ny mifanohitra amin'izay dia azo ampiasaina ho referansa amin'ny rafitra hafa.
Notsotsorina be ny asan'ny mpitantana, ahafahany mifantoka amin'ny lahasa manokana.
Tsy manaisotra anao amin'ny fahalalana sy ny fampiasana ny console mihitsy izany rehefa mampiasa ny interface administratif, fajifa iray hafa fotsiny amin'ilay rafitra izany, afaka mitrandraka tanteraka ny fahafahan'ny console (traikefa manokana).
Hatreto aloha ny zava-niainako, na dia fohy aza ny fotoana, dia nahasoa, ka tiako ny hizara izany aminao. Vetivety, torohevitra kely momba ny fametrahana fampiharana sy serivisy hafa ao Zentyal.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Tambajotra / seriver » Ny zavatra niainako niaraka tamin'i Zentyal
Lahatsoratra tsara, miandry ny andiany feno aho 🙂
Fantatrao fa manjakazaka amin'ny tenako aho saingy mitazona ny nampanantenako.
Ny marina dia efa nijery zentyal efa ela aho nefa tsy namporisika ny tenako hampiasa azy, noho ny antony maro, saingy heveriko fa lahatsoratra tsara ary mamporisika anao aho hanandrana azy, arahaba
Marina fa maro no misafidy ny manangona ny zava-drehetra amin'ny alàlan'ny fanaraha-maso bebe kokoa, fa ny tombony lehibe azon'ny Zentyal noho ny hafa dia ny manome anao fampiononana sy fanamorana ny fitazonana ny firafitry ny fisie fisie toy ny hoe nametraka azy io izahay.
Ny indroa nanirianay ny hizaha toetra ny zava-bitan'i Zentyal hanao zavatra mitovy amin'ny ilainao, nitranga taminay fa nianjera ny mpizara taorian'ny andro vitsivitsy na nanomboka tsy nahomby ny CUPS, na SAMBA3 niasa tsy nahy, mahamenatra satria araka ny filazanao ny sary. tontonana fanaraha-maso dia feno ary mahazo aina.
Niafara tamin'ny fampiasana openSUSE ihany izy ireo tamin'ny farany na dia tadidiko aza fa misy olana rehefa manavao ilay kinova vaovao.
Fanandramana mahaliana, arahaba!
Tsy dia afaka miresaka betsaka momba ny Zentyal 2 aho (heveriko fa miresaka momba ny Samba 3 ianao), kely ny zavatra niainako tamin'io, Elav dia manana traikefa bebe kokoa ary amin'ny tontolo mitantana mpampiasa 800 eo ho eo, fa tsy misy misy Samba. Ankehitriny ny Zentyal 3 dia raharaha iray hafa, ny fiovana amin'ny Samba 4 dia radical ary nijanona tamin'ny fampiasana PostgreSQL ho an'ny MySQL izy ireo, izay nampitombo ny hafainganana sy ny fihenan'ny fihinanana.
Philoquin dia hoy izy:
Mampiasa zentyal amin'ny tambajotra misy mpampiasa 410 aho. saika ny milina rehetra misy linux sy ny zava-drehetra dia nahafinaritra.
Valiny tamin'i Filoquin
avy amin'ny mpampiasa 40 ka hatramin'ny 60 no tiako soratana
Faly aho fa raha ny amiko dia tsy tonga amin'ny 100 aho fa milamina tsara ny zava-drehetra.
arizala83 dia hoy izy:
Salama, ho an'ny mpampiasa 100 total, ahoana ny fomban'ilay mpizara momba ny fitaovana. (Memory, processeur)? Arahaba.
Mamaly an'i arizala83
walter sufan dia hoy izy:
Salama Azonao atao ve ny milaza amiko hoe inona ny linux ampiasainao ary ahoana no nampidiranao azy amin'ny maha-mpanjifa Zentyal anao? Liana amin'ny vahaolana feno aho ho solon'ny microsoft, na amin'ny mpizara na amin'ny mpanjifa. Misaotra betsaka
Mamaly an'i walter sufan
Misaotra betsaka anao tamin'ity lahatsoratra ity, nanimba ny tenako nividy mpizara hizara rakitra, torrent, pc virtoaly sns ... aho ary hianatra ny fomba hitantanana Linux amin'ny maha-mpitantana anao. Nieritreritra ny hametraka ny mpizara ubuntu "bareback" aho saingy heveriko fa hanomboka amin'ny zentyal, izay amin'ny alàlan'ny famoahana ny dikanteny 3.2 dia mivoaka amin'ny 19 septambra.
Zentyal dia safidy tsara hafa, raha ny marina ho ahy ny zavatra feno indrindra sy tsara indrindra araka ny nolazaiko tao amin'ny lahatsoratra dia ny fanajany ireo rakitra fikirakirana, izay raha ny tokony ho izy dia referansa ary momba ny 3.2 dia antenaiko ho zavatra tsara.
Iaco dia hoy izy:
Lahatsoratra tena tsara, mizaha toetra an'i Zentyal hampihatra azy ao amin'ny tambajotranay koa aho. Fantatro fa misy forum ofisialy, saingy hitako fa maro ireo kofehy matevina tsy voavaha mbola manohy ny fotoana atolotry anao anao hividy famandrihana.
Azoko tsara ny antony manosika ny orinasa hanao izany ary toa tsy fahampian'ny netiquette amiko ny manandrana manohy ny kofehy raha vao nipoitra ny fanontaniana momba ny fanohanana karama; fa…
Tsy ho liana amin'ny fandraisana anjara amin'ny vondrona google ve ianao haneho hevitra momba ny zavatra niainany? Manontany anao aho satria hitako fa miasa am-pahavitrihana amin'ny fanaingoana ny zentyal ianao, zavatra iray izay iasantsika mafy ankehitriny (ohatra, mahita ny fomba "famonoana" ny infra rehetra an'ny zentyal aho ary mamela ny fikirana miasa fotsiny, Heveriko fa izany dia azo atao amin'ny fomba tsotra - fanalana andro ny serivisy angamba - raha tsy izany dia mitaky fiddling miaraka amin'ireo sora-tanana fikirakirana mialoha sy aorian'ny fampiharana, sns sns.
Azafady, lazao amiko izay hevitrao momba ny hevitry ny vondrona, raha tsy izany dia azonao atao ny manoratra ahy ho fifandraisana mahaliana amin'ny olana mifandraika amin'ny Zentyal, dia tsy hanana olana amin'ny fiaraha-miasa hamaha olana aho na hahita fanaingoana mandroso.
Mamaly an'i Yaco
Misaotra anao aho noho ny hevitra ary amin'ny fanajana ny vondrona hitako fa hevitra tsara izy io, marina fa ao amin'ny forum dia misy ny olana amin'ny tranga maro tsy misy vahaolana ary somary mitady anao izy ireo hampiasa ireo kinova voaloa. Efa manana anao amin'ny fifandraisako aho.
Mikasika ny fametrahana Zentyal kely indrindra dia tsy afaka mametraka afa-tsy ireo singa ilaina ao amin'ny farafahakeliny Ubuntu LTS ianao ary avy eo ampio ireo izay takiana ao aoriana, mivantana avy amin'ireo tahiry.
Ity ny fanazavana amin'ny antsipiriany:
Ireto ny trano fitehirizana ny kinova samihafa an'ny Zentyal:
Rehefa avy nanampy ny tahiry Zentyal an'ny kinova tadiavina sy manavao ny loharano (apt-get update) dia azonao atao ny mahita ireo fonosana misy:
ary ity ny fanazavana momba ireo fonosana samihafa misy:
Errata: "azonao atao ny mahita inona ny fonosana misy:"
Azonao atao ny mahita ireo singa napetraka ao amin'ny rafitra miaraka amin'ny:
Raha hijery ireo singa hita ao amin'ny tahiry:
fikarohana apt-cache zentyal | Bebe kokoa
Mahaliana fa amin'ny andiany 2 dia nanome ny safidy hisafidianana ireo serivisy hampiasaina amin'ny fametrahana azy, fa amin'ny kinova 3 dia tsy izany intsony no izy.
Nanandrana azy tamin'ny androny aho fa noho ny antony nampiasako azy dia tsy afaka nametraka azy io araka ny tiako aho. Ankehitriny dia mampiasa ClearO miaraka amin'ny valiny lehibe aho, ary mora kokoa ny manamboatra azy.
Raha nanazava tao amin'ny lahatsoratra momba ny safidin'ny Zentyal ClearOS aho dia iray amin'ireo mety ho azo natao izany, saingy ny marina dia tsy nahazo aina aho noho ny fiankinan-doha lehibe tamin'ny Internet hatramin'ny fametrahana hatramin'ny voalohany.
Salama namana alintm azafady azafady mba afaka manampy ahy ianao amin'ny fomba fiasan'ny bandwidth control amin'ny alàlan'ny ip mailako joaquinloayza11@gmail.com
Tomy dia hoy izy:
Lahatsoratra tsara !!!
Valio i Tomy
Fampahalalana tsara, misaotra fa manavao anay hatrany
jose bravo dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, fanontaniana izay kinovan'ny zentyal no maimaim-poana ho an'ny mpizara hatramin'ny nametrahako telo ary ny mpampiasa tsy niditra tao amin'ny domini tao amin'ny samba, tsy eo ny ldap config raha afaka manampy ahy ianao
Mamaly an'i jose bravo
Lahatsoratra tena tsara, misaotra betsaka anao nizara ny zavatra niainanao.
Nandritra ny telo taona teo ho eo dia nijery an'i Zentyal aho ary tamin'ny zavatra niainanao no nanosika ahy hampihatra azy, ary tiako ianao hanohana ahy amin'ny tolo-kevitra na torohevitra momba ny fampiharana ahy.
Inona avy ireo toetra tokony hananan'ny mpizara ahy (processeur, memoar RAM, sns.) Hampihatra azy amin'ny tamba-jotra ho an'ny mpampiasa 60? mandray an-tanana ireto serivisy manaraka ireto:
Ao amin'ny mpizara mailaka amin'ny ho avy fohy
ireo no ho serivisy lehibe.
Tena tiako ny soso-kevitrao. Miarahaba.
Valiny tamin'i Jose Angel
Raha ny zavatra nohazavainao dia mitovitovy amin'ny fanaparitahana izay ananako miaraka amin'i Zentyal ao amin'ny orinasako ary ny ampiasaiko dia pc misy i3 sy 2 GB RAM ary hatreto tsy misy olana.
Valio amin'i AlainTM
MIAKARAKA dia hoy izy:
Valin-kafatra amin'ny JOAKING
positron dia hoy izy:
Miasa amin'ny institiota iray misy mpianatra 500 eo ho eo izay mifandray amin'ny solosainany manokana. Handeha aloha aho amin'ny fifandraisana Internet, satria na eo aza ny fivoahan'ny 100Mbps, amin'ny fotoana sasany dia mirodana izany.
Izaho dia nijery UTM sasany (SonicWall, Cyberoam ...), fa ny teti-bola omeny ahy dia manodidina ny 4000 €, izay tokony ampiantsika lisansa isan-taona tsy lafo.
Izaho "irery" dia mila zavatra 3:
· Fehezo fa zaraina ara-drariny ny fantsom-pifandraisana ary tsy misy mpampiasa mahavita manapaka ny fifandraisana noho ny fampiasana ratsy.
· Sivina ny adiresy tranonkala (sy programa manandrana mandingana ny sivana, ohatra Ultrasurf).
· Tapaho ny fidirana amin'ny Internet hisintomana programa (na ferana ny fantsom-pifandraisana).
Tokony ho mangarahara amin'ny mpampiasa izany rehetra izany: tsy tokony hampiorina na inona na inona amin'ny fitaovany izy ireo, ary tsy tokony hahita fanemorana fanampiny.
Fantatrao ve raha azoko miaraka amin'i Zentyal izany? Raha tsy izany, manana tolo-kevitra ve ianao?
Mamaly an'i positron
Fiteny Alexander dia hoy izy:
Mifandray amin'ny alàlan'ny Wifi ve ny mpianatrao?
Valiny tamin'i Alejandro Lengua
Eny, amin'ny alàlan'ny teboka fidirana samihafa manerana ny afovoany.
Manana olana mitovy amin'izany aho, fa amin'ny ADM 10Mbps. Toa mavesatra loatra amin'ireo lahasa ireo i Zentyal, raha tsy mikasa ny hametraka fonenana na mpizara mpanonta printy… Tsy vahaolana ho anao izany.
Izaho dia nanandrana tamin'ny karazana Proxy / firewall Endian, IPCop ary pFSense misy valiny tsy ara-dalàna: Ny fametrahana fotsiny ny firewall dia mihatsara ny zava-drehetra, satria tsy tapaka intsony ny router amin'ny fifandraisana maro. Saingy amin'ny fotoana hampiasako ilay proxy dia mandeha miadana kokoa ny zava-drehetra, ary tokony ho ny mifanohitra amin'izay no izy! Ary raha manandrana manivana URL ianao dia tsy holazaiko aminao akory. Ny hevitro dia ny hampiasan'ny proxy ny solonanarana / fanamarinana tenimiafina hifehezana ny toerana hijerenany, saingy matahotra aho sao hahomby. Angamba izany dia satria voafetra ho an'ny mpampiasa ananako ny masiniko, tsy haiko (manodidina ny 60-70 eo ho eo)
Nahita vahaolana mety ve ianao? Ahoana no anaovanao azy izao?
Farany miaraka amin'i Zentyal. Ny takiana rehetra izay efa tanteraka. Roa volana izahay no tao ary tsy nisy olana.
Tamin'ny voalohany dia hianjera ny masinin'ny mpizara, saingy nanova ny karatra tambajotra ho an'ny matihanina iray aho ary nampitombo ny RAM ho 8GB. Amin'ny teti-bola voalohany manodidina ny € 3000 (ho an'ny taona voalohany) izay nangatahin'izy ireo taminay € 600 izay efa nampiasainay, tsy eo izany, tsy misy, fa tsy ratsy.
Ny famaliana ireo fanontaniako, eny, azo atao tokoa izany. Na dia manoro hevitra anao aza aho mba hanana hevitra fototra momba ny Linux raha te hamaha ny olana mety hitranga.
Raha ny zavatra niainako dia ny milina no olana, zava-dehibe ny mampiasa vola kely ao anatiny.
Salama Sergio. Mahaliana ny raharaha. Hatramin'ny androany, inona no ampiasainao? Nampiasa zentyal nandritra ny roa taona teo ho eo izahay ho an'ny SME, ary mahaliana ny marina, fa amin'ny ampahany amin'ireo mailaka dia voafetra be ny fifehezana ny spam sy ny hafa.
Ahoana no hitondranao ny tenanao anio? Mbola miaraka amin'i Zentyal ve ianao? Ny fetra napetraka eo amin'ny rafitrao, heveriko fa nanao izany tamin'ny linux mivantana izy ireo, nandingana ny zentyal, sa tsy izany?
1 taona mahery lasa izay dia nametraka an'i Zentyal aho mba hampiasa an'i Zarafa, saingy loza izany satria i Zarafa dia nampandeha ny serivera ary nijanona tsy nihantona intsony. Tamin'ny farany dia nifarana tamin'ny fametrahana SME Server aho.
Raha ny fahitako azy dia ny olako dia noho ny fampiasana mahery ny MySQL izay nananan'i Zarafa. Voavaha ve izany?
Mauricio Vargas dia hoy izy:
Tena tsara Post. Manana fangatahana aho, nifanerasera tamin'i Zentyal 3.4 nandritra ny roa volana aho, manana Windows 2012 Domain Server ary te hitondra ireo mpampiasa Windows controler aho, hametaka azy ireo ny mpizara mailaka fanovana misokatra, fa ny fifandraisana amin'ny mavitrika Tsy afaka natao ny lahatahiry, mankasitraka tolo-kevitra iray aho.
Valiny tamin'i Mauricio Vargas
Dart Valdez dia hoy izy:
Salama, amin'ny ora fiasana amin'ny fitsapana efa nalain'ny asa, raha manana antoka ara-teknika azo antoka ianao fa azo atao ny manao ilay asa ary raha amin'izao fotoana izao dia tsy azonao atao ny mamaritra ny drafitra fanovana ara-teknika - tsikelikely - hampiharina Zentyal, miteny aho fa fotoana izao hanakaramana mpanohana, ofisialy raha azo atao.
Ny làlan'ny hetsika izay atoroko dia ny hampiakarana ny scenario ankehitriny, ilay scenario tadiavina, ary hifandraisanao amin'ny vahoaka Zentyal, anontanio izy ireo raha azo atao ny manatona ilay scenario tadiavina miorina amin'ny toe-javatra misy ary avy eo, raha afaka manome teknika mivantana manohana (fa tsy turnkey tanana), hamaly ny fanontaniana ara-teknika / fanontaniana mety hitranga mandritra ny fifindra-monina. Raha tsara ny valiny, ny dingana manaraka dia ny fividianana fonosana fanohanana Zentyal izay manome ireo endrika fanohananana nangatahina.
Ny safidy hafa dia ny fanohananao ny fanohanan'ny antoko faha-3. izay efa niaina traikefa ara-teknika mitovy amin'izany.
Valiny tamin'i Dardo Valdez
Salama tsara, namana mpamangy tsara, fanontaniana iray amin'ny zentyal no ampiasainao ho an'ny mpizara anao satria efa nanandrana tamin'ny 3, 3,2 ary 3,5 aho ary tsy mandeha ny samba, tsy afaka miditra amin'ny ekipa amin'ny sehatra aho, tiako ny fanampiana anao
Amin'izao fotoana izao dia mampiasa ny kinova 3.3 aho izay farany ampiasaiko ho fototra amin'ny 12.04, manantena aho fa afaka mamaha ity kinova ity ianao.
namana mba hahitana raha manampy ahy hametaka tsara ny zava-drehetra izy io nefa tsy mamela ahy hiditra amin'ny solosaina ao amin'ny windows windows xp ary handresy 7 tiako izany raha afaka manampy ahy ianao na misy fetrany ireo kinova ireo
Andre Lagunas dia hoy izy:
Zentyal hatramin'ny kinova 2.0.xx dia mazàna mihantona aorian'ny andro vitsivitsy tsy misy antony mazava ... izay imbetsaka no voatery namerina ny server.
Tamin'ny andiany 2.2.xx, nilamina ny sehatra ary nampiditra fanatsarana maro.
Nampiasainay izany hatramin'ny volana vitsivitsy lasa izay tao amin'ny tamba-jotra orinasanay izay mampitohy tranokala amerikana latina 20 miaraka amin'ny fahombiazana lehibe.
Azoko lazaina fa fitaovana lehibe io.
Valiny tamin'i Andres Lagunas
Fantatro fa efa taloha ny lahatsoratra fa ilay zavatra nolazainao tamin'ny fanamarinana proxy ho an'ireo mpampiasa voafetra ihany no mahazo ahy. Azonao atao ve ny manazava bebe kokoa momba ny fomba namahana azy io?
JMKA dia hoy izy:
Salama alina, manana PC i3 ​​aho miaraka amin'ny ZENTYAL 4.0 ao amin'ny Biraoko, salan'isa 50 PC no mifandray ary te hanana fifehezana tsara ny Internet aho, rehefa mampavitrika ny Transparent Proxy aho dia tsy misokatra ny pejy sasany, miseho ny pejy ZENTYAL ary miteny hoe Tsy hita ny DNS Server, tsy hitako izay hatao intsony, nitady sy namaky aho fa tsy azoko ny vahaolana, antenaiko fa afaka manome vahaolana ahy izy ireo. Misaotra anao.
Valiny amin'i JMKA
Salama alina, manana PC i3 ​​aho miaraka amin'ny ZENTYAL 4.0, manana milina 52 eo ho eo mifandray aho, rehefa ampandehiko ny TRANSPARENT PROXY misy pejy sasany tsy misokatra ary azoko ny Pejy Zentyal ary milaza izany fa tsy hita ny DNS Server. Ny sasany amin'ireo pejy izay tsy manokatra dia:
Manantena aho fa afaka manampy ahy hamaha izany ianao, satria efa namaky sy nikaroka dia tsy nahita vahaolana ...
Salama atoandro namana, azonao atao ve ny mamaha ny olan'ny proxy amin'ny pejin'ny banky? Raha vitanao ny nanao izany dia tiako ny raha afaka manampy ahy amin'ny vahaolana ianao. Misaotra anao.
Salama, salama, ry namana, azafady, mila fantatro ny fomba hifehezana ny bandwidth amin'ny alàlan'ny makina na amin'ny ankapobeny miaraka amin'i Zential ary milamina kokoa ilay kinova, misaotra
satria indraindray dia mahazo ireo lesoka ireo aho amin'ny pejy sasany "" Ny adiresy DNS an'ny mpizara dia tsy voavaha ". be azafady mila olona hanampy ahy aho.
Jose Briceño dia hoy izy:
Miarahaba anao finamanana hariva ny zanako vavy dia tsy maintsy manolotra tetikasa amin'ny zentyal amin'ny mpizara rakitra misy squid sy mail izay kinovan'ny zentyal no manoro ahy ahy hampiasa ny kinova 4 fa manome lesoka maro izany na tsy maimaim-poana
Mamaly an'i jose briceño
Wagner HG dia hoy izy:
Tiako manokana i Zentyal, saingy heveriko fa ity kinova farany ity, 4.1 manana fironana hanao izay ataon'ny fifaninanana. Najanona ny fanohanany ireo endri-javatra maro izay mampiavaka ny zentyal ho fitaovana tena tsara. Manana fironana manokana hitovy amin'ilay zavatra nataon'i Microsoft amin'ireo mpizara azy izy ireo.
Valio amin'i Wagner HG
Salama, ny zavatra niainanao dia tena tsara sy sarobidy. Izahay dia ao anaty toe-javatra mitovy amin'ny anao talohan'ny fampiharana zentyal.
Heverinao ve fa ny kinova NON-ara-barotra dia miorina amin'ny tontolo iainana misy mpampiasa 200? Ny serivisy omen'ny mpizara dia ny Server server, PDC ary mail.
Nandritra ny tontolon'ny fitsapana dia nahavita tsara tokoa izahay, saingy nanandramana solosaina vitsy sy mpampiasa niaraka.
JOSE CARLOS PEREZ dia hoy izy:
Manana olana amin'ny 10.0.3 zentyal aho, manapaka ahy ny mpampiantrano tranonkala ... ary tsy afaka nakarina aho, rehefa tsy nisy namboarina, afaka manao ping anatiny aho ary mahita ny pejin-tranonkala ao anatin'ny tambajotra mihitsy aza, fa avy any ivelany dia milaza amiko fa ny adiresy mpampiantrano dia simba na tsy mandeha ... hainao ny manamboatra an'io ... arahaba sy fisaorana, ao anaty tontolon'ny server Windows 2008 aho, mampiasa zentyal ho vm ...
Valio amin'i Joses CARLOS PEREZ
Condé dia hoy izy:
Izaho dia vaovao amin'i Zentyal, manana ahiahy betsaka aho, fa ny tena manery ahy indrindra dia ny fomba fanamboarana ny mailako ¨UNCHOCKED¨ izay mivoaka amin'ny mailaka miditra sy mivoaka, manana ny kinova 3.5 aho ary nitady na aiza na aiza ary tsy nanao ' t jereo ny fanesorana izany, na ny antony hivoahany ...
Valiny amin'ny fanisana
lokol dia hoy izy:
tsy maintsy manavao ny antivirus ianao, ary hamaha ny olan'ny tsy voamarina
Mamaly an'i lokol
Maurice feliu dia hoy izy:
Vao avy nametraka Zentyal tamina PC tao amin'ny biraoko aho, ary tsy nahatratra ny tapany farany amin'ny fametrahana, izany hoe ny fametrahana tranokala, rehefa averiko indray ny PC dia tsy manainga ahy ny rafitra miasa. Manazava aho fa talohan'ny nametrahako ny Zentyal saika ary afaka nahita ny fomba fiasany aho fa izao dia ataoko mivantana amin'ny kapila mafy hametrahana mpizara.
Valiny tamin'i Maurice Feliu
Manangana toeram-pambolena mpizara 3 aho, ny hevitra dia ny fananana iray natokana ho an'ny lahatahiry actve, ny iray hafa miaraka amin'ny mailaka ary ny iray farany ho mpizara rakitra.
Miezaka ny hanao ny serivera dns an'ny lohamilina roa farany aho ho andevon'ny voalohany nefa tsy mahomby aho. Niezaka nanova ny modely aho fa tsy nanomboka ny fitoeram-pako aorian'ny fampisehoana azy.
Manana hevitra ve ianao?
Valiny tamin'i Nahuel
Idelfonso Barcena Gallardo dia hoy izy:
Salama, manana zentyal 4.0 miasa tsara ny fiasa rehetra ankoatry ny proxy, manandrana manamboatra ny vondrona mpampiasa aho mba hampihatra ny politikam-pikarohana hafa, fa rehefa miditra amin'ny browser aho dia mangataka fanamarinana (tadiaviko) ny mpampiasa dia voamarina ary izy manome lesoka solonanarana na teny miafina, ka toa tsy mandeha tsara ny kerberos sy ldap. Manoro hevitra ahy izy ireo hanao ny fanaingoana ny angisy fa tsy te-tsy hahita ireo tombontsoa omen'i Sentyal aho. Raha afaka manampy ahy amin'izany ianao dia tena tsy hitako izay hatao intsony. Novakiako fa misy fiovana avy amin'ny ldap amin'ity kinova ity, saingy mieritreritra aho fa tokony handeha izany raha ampiharina.
Mamaly an'i Idelfonso Bárcena Gallardo
Joel sulecio dia hoy izy:
Miarahaba anao, mizara aminareo aho fa nitantana ny Zentyal tamin'ireo mpifanaraka aminay ary nanatsoaka hevitra izahay fa vahaolana lehibe azo ampiharina amin'ny sehatra orinasa izany, ampiasainay i Zentyal ankehitriny, ho mpizara lozisialy miaraka amin'ny fitantanana politika. , ankoatry ny fanampiana Owcloud amin'ny safidy hafa amin'ny dropbox, ary amin'ny maha mpizara mailaka azy dia safidy tsara ho an'ny Exchange. Ankoatry ny andraikitra hafa toa ny proxy, mpizara rakitra sns. Ary mamporisika anao hampiasa izany aho.
Valiny tamin'i Joel Sulecio
Inona ny kinovan'ny Zentyal iarahanao miasa ..? fiaraha-monina sa varotra ..?
Roberto Carlos dia hoy izy:
Miaraka amin'ny kinova 3.3 Community Edition
Valiny tamin'i Roberto Carlos
Erwin Giraldo dia hoy izy:
Salama daholo, te-hampihatra zentyal aho, misy manodidina ny 100 ireo mpampiasa ao amin'ny windows 7, te-hametraka domain aho.
Tsy fantatro ny vidiny, ny kinova maimaimpoana dia manohana mpampiasa 100 ... na ny vidin'ny iray efa mandroso kokoa.
Ankasitrahako ny torohevitra
Valiny tamin'i Erwin Giraldo
Jose Angeles dia hoy izy:
Eny, ny kinova maimaimpoana dia tena manohana mpampiasa maherin'ny 150.
Mamaly an'i jose angeles
Salama namana, nangoninao ho an'ny mpampiasa maherin'ny 100… Nijery aho ary milaza fa mpampiasa 25 fotsiny no manohana ..
Ny fanontana fanontana maimaimpoana dia manohana 75, ary mandoa hatramin'ny 300 ny mpampiasa ... tsy haiko hoe marina izany ...
Azonao omena ahy ve ny toro-hevitra momba ny fampiasana ny mololo ???
Ny zavatra dia mila manova andalana sasantsasany amin'ny fikirakirana izay efa niasako tao amin'ny Postfix (main.cf) na ohatra ny latabatra fitaterako. Araka ny antontan-taratasy zentyal dia azonao atao ny mandika ny môdely voalohany ao amin'ny / etc / zentyal / stubs / toy ny: /etc/zentyal/stubs/mail/transport.mas ary /etc/zentyal/stubs/mail/maincf.mas. Vita izany alohan'ny na aorian'ny fandaminana na alohan'ny handrindrana ny mpizara zentyal na namboarina indray mandeha azoko atao ve ny manao an'ity kopia ity ary manova izay ilaiko hanova ny filako?
Jaime Orjuela dia hoy izy:
Tena tsara ny lahatsoratra. Tena ratsy aho fa tsy mampiasa Zentyal intsony. Niezaka ny artica rehetra, pfsense, zentyal, zeroshell, sns sns aho, ary ny tena tiako indrindra dia ny gateproxy, izay script installer tsy mitovy amin'ireo distros hafa. Natao ho an'ny ubuntu 14 lts io (talohan'ny nifanarahana tamin'i debian fa nampiato ny fanampiana tsy haiko ny antony). Ny tiako indrindra dia ny fanamboarana efa vonona hampiasaina. Tena tsara ilay proxy. Manana sivana hex (izay tsy ananan'ny hafa) hanakanana ny ultrasurf sy ireo programa proxy kely ary miaraka amina lisitra mainty amin'ireo tranonkala voasakana.
Misy zavatra tsy ampy toa ny IDS / IPS (saingy ao amin'ilay lesona dia lazain'izy ireo fa azo ampidirina), napetraka ny manager post fa tsy voasivana (ao amin'ny lesona tsy omeny laharam-pahamehana), tantanina amin'ny webmin (izay tena tsara, ho an'ny fanaraha-maso azy dia misy sarg, sqstat ary ntop-ng, ny fiarovana dia ambony noho ny zentyal, ary izany ny kinova alpha, ny fanohanana dia tena tsara, haingana sy maimaim-poana ao amin'ny tranonkalany (gateproxy ny pejiny. com fa ampiantranoina ao anatin'ny maravento.com)… na izany aza, efa niasa nandritra ny volana maro aho niaraka tamin'ny gateproxy, heveriko fa tsara izany. Manoro hevitra azy aho, indrindra ho antsika izay te hianatra mandritra ny fizotry ny fametrahana ary mahafantatra izay mitranga ary tsy manana ny zavatra rehetra atolotra antsika amin'ny lovia volafotsy, raha tsy fantatrao izay raketiny na ny fomba fiasa anatiny.
Mamaly an'i jaime orjuela
habuitragot dia hoy izy:
Salama Alaintm, arahabaina noho ireo fanehoan-kevitra ireo izay, araka ny nambaranao, dia tsy matetika; saingy ilaina tokoa izy ireo satria miatrika ireo olana ireo isan'andro isika. Na dia tsy matihanina amin'ny sehatry ny rafitra aza aho dia tiako amin'ny rindrambaiko sy rindranasa maimaimpoana. Manana andraikitra ara-pitantanana amin'ny orinasa mikraoba aho ary mampiasa ny Zentyal 3.5 ho toy ny faran'ny farany. Ao ambadiko dia tiako ny hametraka an'i Dolibarr ho CRM sy OpenKM ho mpitantana antontan-taratasy. Noho izany miandry ny lahatsoratrao aho. Androany dia manana zavatra maro izay mbola tsy azoko, Misaotra
Mamaly an'i habuitragot
andres abakay viera dia hoy izy:
tsara, tiako ho fantatra ny fomba fampiharana proxy amin'ny zentyal 4.2, hanakanana ny facebook sy ny youtube amin'ny tamba-jotra eo an-toerana
Mamaly an'i andres abakay viera
Ny lahatsoratrao dia tena mahaliana ho anay izay manomboka mampihatra ny Zentyal.
Mampihatra ny Zentyal 4.1 aho ary tsy hitako ny fomba hanerena ireo mpampiasa sehatra hanova ny teny miafiny. Ahoana no hametrahako ny politika miafina ao amin'ny sehatra Zentyal?
Hitako ireo modely, manokana ilay ao amin'ny usr / share / zentyal / stubs / samba / acc-zentyal.mas fa tsy sahy manova zavatra momba izany aho.
Azonao atao ve ny manampy ahy amin'izany? Na mpiara-miasa hafa.
Mampiasa Zentyal 4.0 aho, rehefa mampihatra ny Proxy (Tsy mangarahara) aho, mahita ny olana fa rehefa mamorona lalàna fidirana mifototra amin'ny vondrona mpampiasa, dia tsy mamela ny fitetezana izany, manome ahy ny lesoka «Ny mpizara proxy dia mandà ny fifandraisana" Ankehitriny , ireo vondrona dia karazana "Fiarovana", hoy ny namana iray tamiko fa tsy tokony ho karazana "Distribution" izy io, fa rehefa noforoniko toy izao izy ireo dia tsy hitan'ny lalàna ny karazana vondrona fizarana. Ary rehefa apetrako amin'ny zavatra izy dia miasa tsara.
Misy hevitra momba ny olana? Misaotra anao..
Alirio Yacht dia hoy izy:
pos tsara, fantatro izy ary nampiasako azy, toy ny firewall ihany, ankehitriny rehefa nanomboka nampiasa azy aho hizara folder sy hametrahana foibe ny fidiran'ny mpampiasa. volo daholo ny zava-drehetra. saingy nisy olana nipoitra, ary eo no ilako ny fanohananao, izay novakiako ho an'ny manaraka.
Izy io no ho mpizara rakitra ary tonga lafatra, amin'ny linux hafa dia manana azy ho toy ny mpizara backup aho, mampiasa rsync sy tonga lafatra.
Rehefa miditra toy ny avy amin'ny console ianao ho mpitantana dia tsy manana alalana amin'ireo fampirimana ho an'ny mpampiasa ianao.
rehefa mandinika ireo mpampiasa avy amin'ny console dia misy an'io ihany.
Ahoana no fomba hidirako avy amin'ny console amin'ny maha-administratera domain anao, na avy amin'ny rsync, amin'ny fampiasana ny mpandrindra ny lahatahiry mavitrika hahafahako miditra amin'ny lahatahiry zaraina rehetra
Valiny tamin'i Alirio Yate
Te hahafantatra ny isan'ny mpampiasa faran'izay betsaka azo noforonina tamina LDAP IN zentyal ianao?
baphomet dia hoy izy:
Misy afaka mamaly an'i Pedro; Mba miangavy re?
Valiny amin'i Baphomet
Zentyal fotsiny no ampiasako ho an'ny mpizara rakitra, te-hanao nomaniny ho solon'izay mandeha ho azy amin'ny solosaina hafa amin'ny tamba-jotra aho, saingy izany dia amin'ny alàlan'ny script, tsy te hampiasa programa GUI aho. console fotsiny, azafady olona mahalala, thnks.
Fabius dia hoy izy:
GA-G31 4gb DDR2 Q8200 Mihazakazaka tsara?
Valiny tamin'i Fábio
Charles A. Santos dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, te hametraka fanontaniana aho raha afaka manampy ahy ny sasany aminareo, manana zentyal 2.0 napetraka aho izao, miasa amin'ny maha proxy ahy izy, ny sasany amin'ireo pejin-tranonkala ananako ao anaty entana sivana nefa aseho banga tanteraka ary manahafana ny fomba enta-mavesatrao ny fikirakirana saingy tsy manolotra na inona na inona aho.
Raha misy olona afaka mandray anjara miorina amin'ity fangatahana ity dia andramo azafady.
Valiny tamin'i Carlos A. Santos
Salama, ahoana no fomba fanovako ny encryption an'ny mpizara zentyal vpn? Hatramin'ny fifandraisanao amin'ny client openvpn dia mandefa hafatra fampitandremana cipher tsy azo antoka izy, tiako ny fanampiana anao
Henry_mendozaa@hotmail.com manana 5.0 zentyal aho ho mpizara firewall sy vpn
Ny rindranasa GNU / Linux izay tsy hinoanao dia ao amin'ny Windows
Ahoana ny fametrahana Mari0 amin'ny Debian GNU / Linux